I-LG inelungelo elilodwa lomenzi kwi-smartphone eneekhamera ezintandathu | Zonke iinkonzo ze-intanethi
I-LG yenye yezona zinto zaziwayo kwi-Android. Ikwayenye yeenkampani ezinamalungelo awodwa abenzi, kuzo zonke iintlobo zeefowuni. Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo ilungelo elilodwa lomenzi liye lavuza apho ubona khona Ukusonga okucacileyo kwe-smartphone. Ngoku, sinokubona ilungelo lomenzi elitsha elivela kwikore yaseKorea. Kule meko, basishiya ne-smartphone eya kuba neekhamera ezintandathu zizonke.
Ayizukuba ziikhamera zangemva ezintandathu kodwa sinazo zizonke iikhamera ezintathu kwicala ngalinye yomnxeba. Ilungelo elilodwa lomenzi elibonisa ukuba iya kuba sisiphelo esisezantsi se-LG. Nangona ukuza kuthi ga ngoku kukho idatha encinci kwesi sixhobo senkampani.
Okwangoku, lilungelo elilodwa lomenzi wechiza. Lo nto akukho siqinisekiso sokuba inkampani inezicwangciso zokuphehlelela le fowuni kwintengiso. Ingakumbi ukuba sithathela ingqalelo ukuba i-LG luphawu olunelungelo lobunikazi kwii-smartphones ezininzi, kodwa azisoloko ziphela zisungulwa ezivenkileni. Nangona le yimodeli yokwenyani, enokubakho.
Uphawu sele luqalisile ukwazisa ngeekhamera ezininzi kwisiphelo salo esiphakamileyo, njengoko sele sibonile i-G8 o i-V50 kwi-MWC 2019 edlulileyo. Ke le patent iya kuthatha eli nyathelo limbi ukuya phambili. Ukusukela kwi-Android siyayibona loo nto iimveliso ezininzi zisebenzisa ii-sensors ezininzi, ngaphambili nangasemva.
Kule meko, zizonke iisenzi ezintathu ngaphambili, ngenotshi. Ngelixa ngasemva, i-LG ikwazisa ezinye iisenzi ezintathu. Asazi indibaniselwano okwangoku. Kuba kunokwenzeka ukuba ezinye zazo zenzwa ye-TOF, ukulinganisa ubunzulu xa uthatha iifoto kwezi khamera.
Ngokuqinisekileyo inokuba ngu Inzala yokubheja kwinqanaba eliphezulu elilandelayo lophawu. Nangona kule ngqiqo, kunokwenzeka ukuba kuya kufuneka silinde ubuncinci unyaka de sibe nefowuni entsha ngaphakathi kwinqanaba eliphezulu le-LG. Kodwa siya kuqaphela, kuba lilungelo elilodwa lomenzi elivelisa umdla.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » LG » I-LG patent i-smartphone eneekhamera ezintandathu